Volcanoes na Spain: ihe ha bụ, ebe ha nọ na njirimara ha | Meteorology netwọkụ
Volcanoes na Spain
Portillo nke German | 11/10/2021 09:34 | Geology
Enwere ọtụtụ ugwu mgbawa na Spain, n'agbanyeghị na imirikiti ha dị na Canary Islands. Ihe ọtụtụ mmadụ amaghị bụ na enwere ugwu mgbawa na Catalonia, na Castilla la Mancha na Ciudad Real. Ọ nwere ụfọdụ njirimara pụrụ iche ma ha na -arahụ ụra ugbu a. Enwere ọtụtụ ụdị ugwu mgbawa na Spain ma anyị ga -ahụ ihe njiri mara ha.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ugwu mgbawa dị iche iche na Spain na ihe njiri mara ha bụ.
1 Volcanoes na Spain
1.1 El Teide na Tenerife
1.2 Teneguía dị na La Palma
1.7 Enmedio, ugwu mgbawa dị n'okpuru mmiri n'etiti Tenerife na Gran Canaria
1.8 Pico Viejo, agwaetiti Tenerife
1.10 Alto de la Guajara, agwaetiti Tenerife
El Teide na Tenerife
N'elu mita 3.715 karịa oke osimiri, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ugwu kacha elu na Spain na ugwu mgbawa kacha atọ n'ụwa. Odikwa na Tenerife (agwaetiti Canary), nde mmadụ atọ na -eleta ya kwa afọ. Nhazi ya bidoro afọ 170.000 gara aga na mgbawa ikpeazụ mere na 1798.
Teneguía dị na La Palma
N'October 27, 1971, ugwu mgbawa nke Spain gbawara na njedebe oge wee laghachi nwayọ na Nọvemba 28. Ka ọtụtụ ụbọchị nke mkpagharị seismic pụtara nke ukwuu, edere mgbawa nke ikpeazụ ụnyaahụ. Teneguía dị n'àgwàetiti La Palma, na -erughị mita 1.000 karịa oke osimiri. Enweghị ahịhịa gburugburu.
N'obodo La Restinga (El Hierro), ugwu mgbawa dị n'okpuru mmiri dara na Ọktoba 2011 wee gaa n'ihu ruo March 2012. Afọ ise ka e mesịrị, ndị ọkà mmụta sayensị nyochara ugwu mgbawa ahụ n'ihi na ha na -atụ egwu na ọ nwere ike jiri ike ka elu wee dịghachi ndụ.
Ugwu ọkụ Cerro Gordo dị n'etiti Granátula na Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Ọ bụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ugbu a, ọ na -emeghere ọha maka 2016. N'oge nleta ahụ, ị ​​ga -amụta ka esi arụ ya wee hụ ihu ala mpaghara ahụ niile. Ọ dị mita 831 n'ịdị elu. Volcano Campo Calatrava bụ ọrụ mgbawa dị n'ime ime metụtara mgbago ugwu Betic na mwepụ nke efere Eurasia na Afrịka. Ọ malitere site na mgbawa nke ugwu mgbawa Morrón de Villamayor de Calatrava nde afọ 8,5 gara aga. Mgbawa ikpeazụ ya mere na ugwu mgbawa Columba afọ 5500 gara aga.
Ọ nwere ike ịdị n'agbata afọ asatọ na otu nde, ọ bụkwa akụkụ nke ihe a na -akpọbu "mpaghara mgbawa ugwu." Piedrabuena, nke metụtara mgbawa (La Chaparra, Colada de La Cruz na La Arzollosa) nke butere ihe mgbawa dị mkpa. Mgbapụta ugwu mgbawa ahụ dị elu 100 m, nke mejupụtara ihe mejupụtara ya bụ slag agbazere. Ndagwurugwu ahụ na -emepe na ndịda ọdịda anyanwụ, n'eziokwu, n'ihe banyere mgbaji mgbawa ya, isi ihe dị n'ugwu a bụ mgbawa nke wuru ya wee mepụta mpaghara Pajojo kachasị mkpa na Peninsula Iberian.
Ọ dị na mpaghara Las Manchas nke El Paso, Santa Cruz de Tenerife, La Palma. Ọ gbawara na June 24, 1949, na -ebibi ubi na ụlọ mgbe lava gafere. Ihe si na mgbawa a pụta bụ Cueva de las Palomas, nke akpọrọ Todoque mgbawa mgbawa n'oge na -adịbeghị anya. Mmasị sayensị ya dị oke mkpa na mpaghara ala yana mkpa ndụ ya amụbaala n'ihi anụmanụ na -enweghị atụ pụrụ iche.
Enmedio, ugwu mgbawa dị n'okpuru mmiri n'etiti Tenerife na Gran Canaria
Ọ bụ nnukwu nwere dayameta nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita atọ na ala ya, ọ nweghịkwa ọrụ mgbawa ugbu a. Na mita 500 na ndịda ọdịda anyanwụ nke isi ụlọ ọkụ ọkụ Enmedio, enwere cones abụọ, nke ịdị elu ya anaghị agafe mita 100 site n'oké osimiri. Ụgbọ mmiri German meteor nke Meteor chọpụtara ịdị adị nke ugwu mgbawa a na ngwụcha afọ 1980, n'agbanyeghị na ụgbọ mmiri IEO bụ Hespérides sere ya na ngwụsị afọ 1990. Ọdịda dị elu nke ugwu mgbawa a bụ ihe ama ama, converging naanị nso ala nke ugwu mgbawa.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ọ bụ naanị otu n'ime cones abụọ dị ihe dị ka otu narị mita n'ịdị elu nke dị n'akụkụ ugwu mgbawa Enmedio, nke ịda mba dara, ka amaara. Encmụ ọkụ Enmedio dị nso na Tenerife karịa Gran Canaria. Kpọmkwem, Ọ dị ihe dịka kilomita 25 site na ụlọ ọkụ Abona na kilomita 36 site na ọdụ ụgbọ mmiri La Aldea de San Nicolás de Tolentino.
Pico Viejo, agwaetiti Tenerife
Pico viejo (mita 3.100) bụ ugwu mgbawa dị na Tenerife, ya na Ugwu Teide, Ha bụ naanị ugwu abụọ dị na agwaetiti Canary nwere elu karịa mita 3.000. O nwere oghere dị mita 800 n'obosara na ịdị omimi kachasị nke mita 225, ọ bụbu ọdọ mmiri na -adọrọ adọrọ. N’oge emepechabeghị anya (1798), Pico Viejo malitere ime ihe, na -akpalite otu ntiwapụ akụkọ ihe mere eme nke Tenerife, nke mere n’ime ogige ahụ. Ọ chụpụrụ ihe mgbawa ugwu n'ime ọnwa atọ, wee mepụta oghere itoolu, na -eme ka ihe ojii ahụ wụsa n'akụkụ ndịda Caldera de Las Cañadas. A na -akpọ usoro a nke akpachapụrụ anya wee mee Narices del Teide. Ọ bụ akụkụ nke okike okike nke Teide National Park ma aha ya bụ Montania Cha Hora makwaara ya.
Ọ bụkwa oghere eke echekwara echekwara ma bụrụ nke ihe ncheta eke nwere ihe ọkụkụ Teide-Pico Viejo. Nhazi ya malitere ihe dị ka afọ 200.000 gara aga n'etiti agwaetiti ahụ. Ekwesiri ighota na magma dị mfe ịrị n'àgwàetiti ahụ ugbu a, na n'ihi na a na -ahụta na ndagwurugwu a bụ otu n'ime oghere na -adọrọ mmasị na agwaetiti Canary, n'ihi ụdị ya dị iche iche ha sitere na mmalite ya.
Los Ajaches bụ nnukwu mgbawa ugwu nke dị na ndịda agwaetiti ahụ. Mpaghara a dị mkpa nke ihe nketa ihe ochie dị n'obodo Yaiza, ebe anyị na -ahụ ọgba, ihe a tụrụ atụ na ihe mkpuchi nke ebe ịta nri oge ochie. Mpaghara ahụ bụ akụkụ kacha ochie n'agwaetiti ahụ ma mmebi ka na -emebi ya nke ukwuu, ndagwurugwu nke ụzọ okike a gafere n'ime nde afọ iri gara aga. Los Ajaches dị na Timanfaya National Park. Atụmatụ Los Ajaches gbatịrị site na Punta del Papagayo na nsọtụ ndịda ruo Playa Quemda na etiti. Ha bụ foduru nke ugwu mgbawa site na nde afọ 15 gara aga. Mbibi nke oké osimiri emebiwo ihe ka ukwuu n'ala dị mita 600 n'ịdị arọ. Mgbawa nke ikpeazụ bụ nde afọ atọ gara aga.
Alto de la Guajara, agwaetiti Tenerife
N'elu mita 2.717 karịa oke osimiri, ọ bụ ugwu mgbawa nke atọ kachasị elu na agwaetiti Canary. E hiwere ya nde afọ atọ gara aga. Ogige Ntụrụndụ Teide bụ ihe nkwado na Ogige Ntụrụndụ Hawaii Volcanoes; Nke a bụ ọkachasị n'ihi na onye ọ bụla n'ime ha na -anọchite anya ụdị agwaetiti a (Hawaii) na usoro mepere emepe na nke ọzọ (Ted) nke magma na ụdị mgbawa ugwu na -agbachapụbeghị. Site na nlele odida obodo, Teide National Park nwere njiri mara nke Grand Canyon National Park (Arizona, USA).
N'obodo Olot dị na Girona, anyị chọpụtara ugwu mgbawa Santa Margarida. Site n'ọdịdị, o nwechaghị ihe jikọrọ ya na nke gara aga. Ihe kacha dị egwu bụ na e nwere mgbapu n'ime oghere ahụ.
Na mpaghara La Garrocha Nke a bụ ugwu mgbawa Strombolian. Kpọmkwem, ọ dị na Garrotxa Volcanic Belt Natural Park, ebe enwere cones 40 na mgbawa mmiri 20. A na -ahụta ya dịka nke ọdụdụ, mana ọ na -arahụ ụra kemgbe mgbawa ikpeazụ bụ afọ 11.500 gara aga.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ugwu mgbawa na Spain na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Volcanoes na Spain